AmaNgqina KaYehova Aguqulela ISpanish Afudukele ESpeyin
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelian IsiMixe IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTarascan IsiTelugu IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiUkrainian IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiWallisian
Abaguquleli BeSpanish Bafudukela ESpeyin
UYesu wathi iindaba ezilungileyo zoBukumkani zaziya kushunyayelwa ehlabathini lonke. (Mateyu 24:14) Ukususela ngo-1909 uncwadi lweBhayibhile lwamaNgqina kaYehova beluguqulelwa ngeSpanish, yaye luncede abantu abasehlabathini lonke basiva isigidimi soBukumkani ngolwimi lwabo. Baninzi abantu abathetha isiTshayina njengolwimi lwabo lokuqala, ibe iSpanish silandela emva kwaso kuba basisiqingatha sebhiliyoni abantu abasithethayo ehlabathini lonke.
UWilliam ongumguquleli weSpanish uthi: “ISpanish lulwimi oluthethwa ehlabathini lonke ngabantu abanezithethe ezingafaniyo. Eyona nto siyifunayo kukukwazi ukufikelel’ iintliziyo zabantu beemvelaphi, bemfundo nabakwimigangatho eyahlukahlukeneyo yobomi.” Ukuze bakwazi ukufikelela onke la maqela, abaguquleli baye bakhethwa kwiindawo ezahlukahlukeneyo ezifana naseArgentina, eColombia, e-El Salvador, eGuatemala, eMexico, ePuerto Rico, eUnited States, eUruguay, eVenezuela naseSpeyin.
Kangangeminyaka emininzi, amaNgqina kaYehova ayesiguqulelela eUnited States iSpanish, encedwa ngamaNgqina aseArgentina, eMexico, naseSpeyin. Kodwa ke ngo-1993, abaguquleli beSpanish bafudukela ePuerto Rico, loo nto yanceda basebenza bonke bendawonye.
NgoMatshi 2012 kwagqitywa ngelithi iSebe Labaguquleli beSpanish lifudukele kwiofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eSpeyin. UEdward ebalisa uthi: “Kwafuneka sifuduse abantu, impahla yabo, oomatshini nesinye isixhobo esibalulekileyo kwisebe lethu—ilayibrari yabaguquleli.” Le layibrari ineembekiselo ezimalunga neziyi-2 500 kuquka neenguqulelo ezininzi zeBhayibhile yeSpanish.
Bamkelwa ngobubele eSpeyin
NgoMeyi 29, 2013, abaguquleli beSpanish bafika kwikhaya labo elitsha yaye bamkelwa ngobubele yintsapho yaseBheteli yaseSpeyin. Abaguquleli, iimbekiselo noomatshini babo bawela uLwandlekazi iAtlantic baza bafika, konke oku kwenzeka ngenxa yomsebenzi onzima oye wenziwa ekucebeni le mfuduko. Abantu abafunda uncwadi lweSpanish abakhange baqaphele kwanto kuba yonke into ihambe kakuhle. UEdward uthi: “Eyona nto ibalulekileyo sisigidimi soBukumkani, ibe sifuna abantu abaninzi abathetha iSpanish bafunde ngesi sigidimi.”